Xulka Faransiiska oo Dhegaha ka tumay Biljimka Una gudbay ciyaarta Finalka ee Koobka Adduunka ! (Daawo Muuqaal) | KALSHAALE
Xulka Faransiiska oo Dhegaha ka tumay Biljimka Una gudbay ciyaarta Finalka ee Koobka Adduunka ! (Daawo Muuqaal)
Laascaanod ( Kalshaale ) Xulka qaranka France ayaa u soo baxay finalka koobka aduunka kadib markii ay 1-0 ku khaarajiyeen Belgium. Samuel Umtiti ayaa noqday geesiga xulka France kadib marii uu dhaliyay goolka kaliya ee uu xulkiisu ku garaacay Belgium isla markaana ay ugu soo baxeen finalka koobka aduunka.
France ayaa hadda diirada saari doona kulanka finalka koobka aduunka oo ay la ciyaari doonaan midkii habeen danbe soo baxa England iyo Croatia.
Xulka qaranka France ayaa si cajiib ah uga soo gudbay imtixaanadii ay soo mareen waxayna hadda diyaar u yihiin in ay koobka aduunka hantaan markii labaad.